Sudaanitti Xiyyaara waraanaa tokko kufee lubbuun namoota darbe
8 months, 1 week ago 1117 Qoodi
Sudaanitti Xiyyaara waraanaa tokko kufee hanga ammatti lubbuun namoota sadi darbu mirkanaa'eera. Namoota balaa kanaan du'an keessa nama gulantaa Letenaant Koloneel qabu tokko akka argamu 'CGTN Africa' ibsa waajjira Ministira Mummee Sudaan baasee wabeeffachuun gabaaseera.
Xiyyaarichi Roobii darbe kibba biyyattii naannoo bulchiinsa Naayilii Adiitti kan kufe yoo ta'u, namoota keessatti imalaa turan hundu lubbuu isaani darbeera. Garuu namoota meeqa Xiyyaarichaan imalaa akka turan hin ibsamne.
Hanga ammaatti reeffa namoota sadi argameera, kan warra kaaniis barbaadamaa jira.
Sudaanitti Xiyyaarri waraanaa yeroo kufu kun kan jalqabaa miti. Ji'a Amajjii darbe balaa walfakkaatu bulchiinsa Daarfuritti uumamee lubbuun namoota 16 darbe ture. Bara farajoota 2003'ttis balaa walfakkaatuun lammiilee biyya alaa dabalatee lubbuun namoota 116 darbu ni yaadatama.
Sudaan Siyaasa Gaanfa Afrikaa Balaa Xiyyaara
Oct. 25, 2021, 4:52 a.m.
Hoggansi Waraana Sudaan Ministira Mummee biyyatti Abdallaa Hamdook to'annoo jala oolche